छुटाउनु भएको त छैन ? तपाईको आजको दिन कस्तो रहने छ ! - Dhangadhi Khabar
बिहिबार ११, मङि्सर २०७७ २३:५९
आज मिति २०७७ कात्तिक १३ गते बिहीबार, इस्वीसंवत अक्टुबर २९ तारिख सन् २०२०, श्रीशाके १९४२, नेपाल संवत् ११४०, प्रमादी नामको संवत्सरः, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार शुद्ध आश्विनशुक्ल पक्ष चलिरहेको छ ।
सौरमान अनुसार आज शुद्ध आश्विनशुक्लको त्रयोदशी तिथि रहनेछ । आज दशैंको तेह्रौं दिन हो । आज उत्तरभाद्रपदा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा हर्षण, करणमा गर, आनन्दादि योगमा छत्र रहनेछ ।
सूर्य तुला राशिमा, चन्द्रमा मीन राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २७ घटि ४७ पला अर्थात ११ घण्टा ९ मिनेटको रहननेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर १३ मिनेटमा रावण मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ बजेर २० मिनेटमा हुनेछ ।
मेषः आज समय शुभ छैन । चन्द्रमा शत्रु स्थानमा भ्रमण गरिरहेका छन् त्यसैले दिगो योजनाका लागि धेरै रकम जुटाउनुपर्ला । अवसरका लागि केही दौडधूप गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक खर्च बढ्नाले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ । अरूको करकापमा परेर निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । समय दिन नसक्दा अध्ययनमा पछि परिनेछ । आफन्तबाट टाढिनुपर्ने परिस्थिति रहनेछ । खर्च लागे पनि गरेका कामबाट तत्काल फाइदा नहुन सक्नेछ ।
वृषः आज समय राम्रो रहनेछ । मीन राशिमा भ्रमण गरिरहेका चन्द्रमाको प्रभावले मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । दैनिक काममा पनि उल्लेख्य फाइदा हुनेछ । थोरै लगानीबाट मनग्गे नाफा उठाउन सकिनेछ । परिश्रमको फल प्राप्त हुनुका साथै आयआर्जनका स्रोत बढ्नेछन् । व्यापार तथा साझेदारीमा लाभ हुनेछ । तर काममा अनुमानभन्दा बढी लगानी लाग्नेछ । लाभांश सञ्चय गर्न नसकिएला । अरूका लागि खर्च हुनेछ ।
मिथुनः आज पनि समय मध्यम खालको नै रहनेछ । मीन राशिमा रहेका चन्द्रमाको प्रभाव पर्नेछ । जसले गर्दा बाध्यात्मक परिस्थितिले अलमल्याए पनि समय उपलब्धिमूलक नै रहनेछ । शुभचिन्तकहरूले साथ दिने हुँदा पहिलेको चुनौती समाप्त हुनेछ । गुमेको स्थान प्राप्त हुनुका साथै समाजमा आफ्नो वर्चस्व बढ्नेछ । रोकिएका काममा दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोला । नयाँ काममा जग बसाउने समय छ । कामको सन्दर्भमा उच्च पदासीन व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ ।
कर्कटः आज पनि समय खराब रहनेछ । मीन राशिको नकारात्मक प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ, जसले गर्दा दैनिक काममा बाधा पुग्न सक्छ । साथ दिनेहरू नहुँदा आफैं काममा जुट्नुपर्ला । बाध्यात्मक परिस्थितिले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । सामान्य काममा धन र श्रम समेत खर्च हुनेछ । गोपनीयता बाहिरिनाले पनि केही समस्या पर्न सक्छ । अरूको विश्वासमा पर्दा धोका हुन सक्छ । स्वास्थ्यका लागि आहारविहार र व्यायाममा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला ।
सिंहः आज पनि समय शुभ छैन । मीन राशिमा चन्द्रमा रहेकाले सानोतिनो कमजोरीले अल्झाउन सक्छ । बेसुरमा वचन दिने बानीले समस्या निम्त्याउनेछ । पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। अरूको सुझावमा भर नपर्नुहोला । परिवारजनको सहयोग लिँदा राम्रो हुनेछ । मिहिनेत गर्दा जटिल काम समेत बन्नेछ । आफन्तले उत्साह जगाउनेछन् र दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । टाढिएका साथीभाइ नजिकिनेछन् ।
कन्याः आज पनि समय राम्रो रहनेछ छ । मीन राशिको चन्द्रमाको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले अवसरका लागि परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि फाइदै हुनेछ । व्यवसायतर्फ विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ । लगनशीलताले परिस्थितिलाई बदल्नेछ । पछि लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ । अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ ।
तुलाः आज समय राम्रो रहनेछ । अवसरले आत्मबल बढ्नेछ र काममा सफलता प्राप्त हुनेछ । छोटो समयमा फाइदा लिन सकिनेछ । सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ । उपहारले काममा उत्साह जगाउला । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिनेछ भने अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुनेछ । सुखदुःखमा साथ दिनेहरू पनि भेटिनेछन् । परिवारजनको साथले उत्साह जगाउनेछ ।
वृश्चिकः आज समय शुभ छैन । आफ्नो मिहिनेतबाट अरूले फाइदा उठाउने चेष्टा गर्नेछन् । काम शुरुआत गर्नु अघि राम्ररी विचार पुर्याउनुहोला । सेवामूलक कामबाट भने राम्रो उपलब्धि प्राप्त हुनेछ । प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । कर्मयोगले नयाँ मोड लिनेछ भने मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम आर्जन गर्न सकिनेछ । उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ । वादविवादबाट जोगिने प्रयत्न गर्नुहोला ।
धनुः आज पनि स्वास्थ्य र समय राम्रो रहनेछ । आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्ने समय छ । बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलालाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । मान–सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ र मिहिनेतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । काममा साथ दिनेहरू बढ्नेछन् ।
मकरः आज समय ठीक छैन । स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ र प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने हुन सक्छ । अशक्त अवस्थामा व्यस्तता बढ्नेछ । प्रतीक्षित नतिजा कमजोर देखिनाले काम दोहोर्याउनुपर्ला । शुभचिन्तकहरूले काममा साथ दिनेछन् । तर, सम्भावना देखिए पनि सोचेको उपलब्धि प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ । शुभचिन्तकहरूको सहयोगले काम बन्नेछ । आम्दानी भए पनि परिस्थिति खर्चिलो रहनेछ ।
कुम्भः आज पनि समय ठीक छैन । शत्रु स्थानको चन्द्रमाको नकारात्मक प्रभावले काम खर्चिलो बन्न सक्छ । सानो उपलब्धिका लागि ठूलो वस्तु त्याग्नुपर्ला । दोहोर्याएर प्रयत्न गर्दा अवरोध हट्न सक्छ । आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जामार्फत धन जुटाउन सकिनेछ । भेटघाटका लागि समय अनुकूल नदेखिए पनि टाढाका साथीभाइले काममा साथ दिनेछन् । केही खर्च बढ्नेछ । समयमा आलस्य गर्ने बानीले पछि परिनेछ । लगानी बढाउने अवसर भने प्राप्त हुनेछ ।
मीनः आज समय अत्यन्तै शुभ छ । कर्मयोगको विशेष फल प्राप्त गर्ने समय छ । प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउनेछ । आयआर्जन बढ्नेछ भने उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ । कृषि, पशुपालन तथा व्यापारमा फाइदा हुनेछ । अचल धनको उपयोगबाट सामान्य फाइदा उठाउन सकिनेछ । मिहिनेत गर्दा दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ । आफ्नो रकम अरुले प्रयोग गर्लान् । आम्दानी सुरक्षामा समस्या पर्न सक्छ ।
साइतः चन्द्रमा मीन राशिमा छन् त्यसैले उत्तर र पश्चिम बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज बिहीबार परेकाले दक्षिण दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला । शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहिबार १३, कार्तिक २०७७ ०८:४५ मा प्रकाशित